“Liverpool waxay soo qaadatay xilli ciyaareed heer sare ah, waxaana sugeynaa hadiyadda Gerrard” – Henderson – Gool FM
(Liverpool) 18 Maajo 2022. Kabtanka kooxda Liverpool ee Jordan Henderson ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii adkayd ee ay Reds ka gaartay naadiga Southampton.
Liverpool ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay Southampton oo ay ku booqatay garoonka Saint Mary’s, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, ciyaar qeyb ka ahayd horyaalka Premier League.
Haddaba sida ay warineyso BBC Sport, Kabtanka kooxda Liverpool ee Jordan Henderson ayaa ciyaarta kaddib u sheegay warbaahinta:
“Ujeedka ayaa ahaa in dib loo dhigo go’aanka ilaa dhammaadka, waxaan ogeyn in kulanka uu noqon doono mid adag, waxaan sameynay isbedelo badan, wiilashana waxay ahaayeen kuwo aad u fiican.”
“Runtii wax fiican ayaan sameynay xilli ciyaareedkan, kooxda oo dhan ayaa ka qeyb qaadatay, ciyaartoyda aan ciyaarin maanta waxaan rajeynayaa inay diyaar noqdaan Axada.”
“Waxaan ciyaareynaa finalka koobabka kulan kasta, tani waa wax iska caadi ah, waana inaan la tacaalnaa, dhamaanteen waan dabaaldegi karnaa ama ku nasan karnaa dhammaadka xilli ciyaareedka ka dib finalka Champions League.”
“Way adag tahay in diirada la saaro ciyaarta, waxaan ka baranay khibradaas 3 sano kahor, waxaan diirada saari doonaa waxa aan u baahanahay, waxaana rajeyneynaa in Aston Villa ay na siiso hadiyad.”
Si kastaba ha noqotee, Liverpool ayaa kulankeeda ugu dambeeya horyaalka garoonkeeda Anfield kula ciyaari doonta Axada kooxda Wolverhampton, halka Man City ay Etihad ku wajahi doonto naadiga Aston Villa.
Liverpool waxay u baahan tahay inay guul gaarto kulanka Wolves, isla markaana ay Man City laga badiyo ama ugu yaraan ay baarbaro la gasho Aston Villa oo uu hoggaamiyo halyeeyga Reds ee Steven Gerrard si ay ugu guuleystaan ​​​​horyaalka.
Liverpool oo saddex dhibcood muhiim ah ka soo heshay Southampton oo ay ku booqatay garoonka Saint Mary's